Grabzit को उपकरणको साथ कुशल वेब डाटा स्क्र्यापिंग - Semalt सल्लाह
नि: शुल्क अनलाइन वेब स्क्रैपरहरू सूचना र डाटा स collect्कलन गर्न र यसलाई प्रयोग योग्य ढाँचामा व्यवस्थित गर्न उत्तम तरिका हो। उचित वेब स्क्र्यापि tool उपकरणको साथ डेटा स data्कलन गर्न, नयाँ वा अवस्थित डाटाबेसहरूमा मर्ज गर्न, र यसलाई तपाईंको अनलाईन व्यापार बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सजिलो छ। कुनै श doubt्का छैन कि वेब पृष्ठहरू वा पीडीएफ कागजातहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्ने उत्तम तरिका भनेको GrabzIt को वेब स्क्र्यापर उपकरण प्रयोग गर्नु हो!
कस्ता प्रकारका डाटा वा सूचनाहरू स्क्र्याप गर्न सकिन्छ?
यो अद्भुत वेब स्क्रेपरले सजिलै वेबसाइटको कुनै पनि अंशबाट डाटा स्क्र्याप गर्न सक्दछ। यो सामग्री पृष्ठ हो, HTML फाईल, स्प्यान र डिभ जस्तो तत्व, एचटीएमएल तत्व विशेषताहरू, पीडीएफ कागजात वा छविमा भण्डार गरिएको पाठ, तपाईं यसलाई Grabzit को प्रोग्राम प्रयोग गरेर तुरुन्तै स्क्रॅप गर्न सक्नुहुनेछ।
यो वेब स्क्र्यापरले कसरी काम गर्दछ?
GrabzIt को वेब स्क्रेपरले वेब पृष्ठहरू पढ्न सक्दछ किनकि सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले वेब ब्राउजरहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई देख्छन् जुन विशेष Scrapers लाई दुबै गतिशील र स्थिर HTML फाइलहरू स्क्र्याप गर्न सक्षम गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि AJAX वा जाभास्क्रिप्टको साथ उत्पन्न सामग्री सेकेन्ड भित्र र एक hitch बिना स्क्र्याप गर्न सकिन्छ। यसका साथै, वेब स्क्रेपरले पीडीएफ फाइलहरूको सामग्री स्क्र्याप गर्न र JPG र PNG पाठहरू पढ्न सक्दछ।
वेब स्क्रेपरले हामीलाई सबमिट फारमको बटनहरू र लिंकहरूमा क्लिक गर्न, साइटको विकल्पहरू चयन गर्न र अन्य समान कार्यहरू गर्न दिन्छ। यसले साइटहरूलाई सामान्य प्रयोगकर्ताहरूको समान तरिकाले पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि तपाईंले तत्वहरू छनौट गर्नुभयो, केहि वेब स्क्र्यापर्सहरूले तपाईंलाई परिष्कृत नियमित अभिव्यक्तिहरू सिर्जना गर्न सोध्न सक्दछन् ताकि तिनीहरूले समस्या बिना नै तपाईंको डाटा स्क्र्याप गर्न र निकाल्न सक्दछन्। तपाईं पृष्ठभूमिमा नियमित अभिव्यक्तिहरू सिर्जना गर्न Grabzit को प्रोग्राम सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले चाहानु भए जति धेरै फाईलहरू स्क्र्याप गर्नुहोस्।
तपाईको डेटा एक्सेल, XML, JSON, CSV, SQL र HTML जस्ता विभिन्न ढाँचामा पहुँचयोग्य हुनेछ र तपाई यसलाई SQL वा MySQL सर्भरहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं यसको कलब्याक यूआरएल विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई एपीआईहरू प्रयोग गर्न र सम्पूर्ण स्क्र्याप प्रक्रिया स्वचालित गर्न अनुमति दिन्छ। यो वेब स्क्रेपर एक उत्कृष्ट र उत्कृष्ट अनलाइन विजार्डको साथ आउँदछ र स्वचालित रूपमा निर्देशनहरू सिर्जना गर्दछ जसले स्क्र्यापि purposes उद्देश्यका लागि सामग्री पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यसको मतलव तपाईले आफैंले स्क्र्याप गर्न चाहानुभएको सामग्री चयन गर्नुपर्दैन।
धेरै वेबसाइटहरूले बहुमूल्य पृष्ठहरूमा समान सामग्री भण्डारण गर्दछ, त्यसैले तपाईंसँग Grabzit को वेब Scraper प्रयोग गर्नुपर्नेछ सबै डाटा एक साथ लक्षित गर्न। यस उपकरणले स्वचालित रूपमा तपाइँको स्क्र्याप दिशाहरूसँग मिल्ने सामग्री खोजी गर्दछ, वेब मार्फत युआरएलहरू पत्ता लगाउँदछ र व्यवस्थित गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं सजिलैसँग सटीक वेब पृष्ठ वा यूआरएल निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं स्क्र्याप हुन चाहनुहुन्छ वा ब्लग वा वेबसाइटको उपखंडहरू क्रल गर्नका लागि निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक मात्र उपकरण हो जुन अनलाइन डाटामा नि: शुल्क पहुँच प्रदान गर्दछ, यसको मतलब यो हो कि तपाईं यो प्रोग्रामलाई एक पैसा पनि तिर्ने बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।